Software updates – Windows – Page 24 – Vessoft
Software updates – Windows – Page 24
English, Українська, Français, Español... Flvto Youtube Downloader 0.6.7.4
العربية, English, Українська, Français... Passport Photo 2.1.1
Horumarinta Tool in ay ka shaqeeyaan la browser Internet Explorer. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad si aad u hubiso waafaqsan hab dhaqanka xeerka, qaabka iyo design qoraalkii kala duwan ee browser ah.
Phone Qalabka ayaa ah maamul ka kooban aaladaha ka LG Electronics. Waxa ay taageertaa gurmad iyo update ah darawallada qalabka.
العربية, English, Українська, Français... WinPcap 4.1.3
Qaar kale waxay Software in la abuuro oo la maareeyo geed qoyska. Software taageertaa abuuro ee gooldhalinta qoyska ah qaabab kala duwan oo ka raadin macluumaadka ku saabsan awowayaashood in database dadweynaha.
English, Français, Español, Deutsch... Spybot - Search iyo Destroy 2.4.40.0
Codecs Tool in uu kelmadaha, cadaadin ama loo farsameeyo audio iyo video files. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u doortaan set doonayo ee codecs iyo subtitles shaqeyn karaan.